Wararkii U Dambeeyey Suuqa Iibka Ciyaartoyda & Qodobbada Xiisaha Leh Ee Ku Jira - Laacib
HomeSuuqa Kala IibsigaWararkii U Dambeeyey Suuqa Iibka Ciyaartoyda & Qodobbada Xiisaha Leh Ee Ku Jira
Wararkii U Dambeeyey Suuqa Iibka Ciyaartoyda & Qodobbada Xiisaha Leh Ee Ku Jira
April 15, 2021 Abdiwahab Ahmed Suuqa Kala Iibsiga, Wararka Ciyaaraha Maanta 0
Laacibka khadka dhexe ee reer England ee Jesse Lingard oo 28 jir ah, ayaan wali go’aansanin haddii uu ku laabanayo Manchester United kaddib markii uu wacdaro ka dhigay West Ham oo uu amaah ugu wareegay. (Goal)
Xiddiga West Ham iyo xulka qaranka Egland ee Declan Rice oo 22 jir ah, waxa uu doonayaa in uu ku biiro Manchester United. (MEN)
Goolhayaha Arsenal ee Bernd Leno oo 29 jir ah, ayaa sheegay in uu ka fiirsanayo in uu ka tago kooxdiisa, waxaanu joojiyey wada-hadallo qandaraaska loogu kordhinayay. (Times)
Borussia Dortmund iyo xulka qaranka Norway laacibka afka hore uga ciyaara ee Erling Braut Haaland oo 20 jir ah, ayaa noqday bartilmaameedka ugu weyn ee Barcelona. Kooxda reer Spain ayay ka go’an tahay in ay xagaaga lasoo saxeexato Haaland. (Mundo Deportivo)
Barca waxa kalsooni ku qabtaa in ay si bilaash ah kula soo wareegi doonto difaaca Manchester City ee Eric Garcia marka uu dhamaado qandaraaskiisu dhamaadka bisha April. (Sport)
Tababaraha RB Leipzig ee Julian Nagelsmann ayaa ku adkaystay in aanu wax wada-hadal ah la gelayn Bayern Munich, si uu ugu beddelo Hansi Flick. (Goal)
Juventus ayaa doonaysa in ay dib ula soo saxeexato weeraryahanka Everton iyo xulka Talyaaniga ee Moise Kean oo amaah ugu maqan Paris St-Germain. Laacibkan ayay Everton ku qiimaysay 50 milyan oo Euro, laakiin waxay Juve doonaysaa in heshiiska uu qayb ka noqdo Adrien Rabiot ama Merih Demiral. (Gazzetta dello Sport)
Chelsea waxay dalab ka gudbinaysaa difaaca reer Brazil ee Alex Sandro oo 30 jir ah, iyadoo kooxda Talyaaniga na u diraysa Emerson Palmieri. (Calciomercato)
Aston Villa ayaa u sheegtay Chelsea in aanay xiisaynayn in ay heshiis rasmi ah kula wareegto Ross Barkley oo amaah kula jooga. West aham ayaa doonaysa 27 jirkan khadka dhexe. (Teamtalk)
Liverpool ayaa la saxeexan karaysa laacibka khadka dhexe uga ciyaara xulka France ee Edouardo Camavinga oo 18 jir ah, si uu ugu beddelo Georgino Wijnaldum oo si bilaash ah kaga tegaya xagaaga. (Express)
Manchester United, Chelsea iyo Tottenham ayaa fiirsanaya weeraryahanka Talyaaniga iyo Torino ee Andrea Belotti oo 27 jir ah. (Tuttosport)
Arsenal ayaa go’aan ka gaadhay difaaca reer Brazil ee David Luiz oo 33 jir ah, waxaanay go’aamisay in aanay siinin heshiis dambe marka uu dhamaado qandaraaskiisa hadda oo ku eg dhamaadka xilli ciyaareedka. (Football.London)